Xildhibaanada labada Aqal oo maanta kulan aan caadi ahayn ku yeelan doonna Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xildhibaanada labada Aqal oo maanta kulan aan caadi ahayn ku yeelan doonna Muqdisho
Waxaa maanta markii ugu horeeysay lagu wadaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ay kulan ku yeeshaan xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Kulankaan ayaa noqonayaa midkii ugu horeeyay oo ay yeeshaan xildhibaanada labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana illaa iyo haatan la dhaariyay illaa 320 xildhibaan oo si rasmi ah uga mid noqday baarlamaanka Soomaaliya.
Sidoo kale, kulanka maanta ee xildhibaanada labada Aqal ayaa ka mid ah kulan dhowr ah oo ay dhinacyadaasi yeelan doonaan, kuwaas oo kulankooda uga hadi doonna qodobka ugu weyn ee horyaala oo ah inay wadajir u magacaabaan guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya.
Xildhibaanada labada Aqal ayaa howlaha ay wadaagaan waxaa ka mid ah doorashada madaxweynaha cusub ee Soomaaliya, balse waxaan weli caddeyn doorka ay kala leeyihiin, wada shaqeyntooda iyo awoodaha mid waliba yeelanaayo.
Dhinaca kale, lama oga cidda rasmiga ah u hogaamin doonta labada Aqal, waana arrin u baahan in labada guddoon ay ka heshiiyaan, waxayna u badan tahay in labada guddoomiye ee Prof. Maxamed Cismaan Jawaari iyo Cabdi Xaashi C/laahi ay noqdaan labo guddoomiyaal.
Si kastaba ha ahaatee, kulanka maanta ee xildhibaanada labada Aqal waxay astaan u tahay marxalad cusub oo dhinaca siyaasadda ah ay galeeyso Soomaaliya, waxaana labadaan Aqal ay dad badan muujiyeen inay caqabad ku keeni doonaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.